Amerika Avaratra " Journey-Assist - Nandehandeha tany Amerika
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Amerika Avaratra
Firenena amerika avaratra
Saint Kitts sy Nevits
Amerika Avaratra - iray amin'ireo kontinanta roa amin'ny ampahany eran'izao tontolo izao, izay any amin'ny tapany avaratra amin'ny hemisantanin'ny Tandrefana.
Ity no kaontinanta fahatelo amin'ny planeta amin'ny lafiny faritra, izay 24,2 tapitrisa metatra toradroa. km, anisan'izany ireo nosy sy faritany. Ny faritry ny kaontinanta dia 20,4 tapitrisa kilometatra toradroa. Sasa amin'ny ranon'ny ranomasimbe Atlantika, Pasifika, ary Arctic izy io. Izy io dia misaraka amina lakandranon'i Panama Atsimo ary avy any Eurasia ny tsipika Bering.
Ny halavan'ny Amerika Avaratra hatrany avaratra ka hatrany atsimo dia 7326 km, ary avy andrefana ka hatrany atsinanana - 5700 km eo ho eo.
- North - Cape Murchison;
- Atsimo (tanibe) - Cape Maryato;
- West - Cape Prince of Wales;
- East - Cape St Charles.
Ny haavon'ny avo indrindra any Amerika Avaratra dia ny Mount Denali (McKinley) ao amin'ny Cordillera (6194 m), ny ambany indrindra dia ny Lohasaha Fahafatesana (86 m ambanin'ny haavon'ny ranomasina).
Ny tanibe dia nomena anarana taorian'ny Amerikana mpandehandeha Amerigo Vispucci. Ny fahitan'i Amerika dia an'i Christopher Columbus. Saingy araka ny angon-drakitra sasany, ny morontsirak'i Amerika dia nahatratra tamin'ny taonjato 10-11 tamin'ny alàlan'ny solontenan'ireo Vikings Skandinavia. Nomen'izy ireo ny anarana hoe Greenland, izay midika hoe "tany maitso." Taorian'ny fandresen'ny eoropeana dia nantsoina hoe World Vaovao ny ampahany tamin'ny tontolo amerikana.
Ny mponina any Amerika Avaratra dia saika avy 500 tapitrisa tapitrisa, izay manodidina ny 7% amin'ny fitambaran'ny mponina manerana ny planeta. Olana avy amin'ny firenena eropeana samihafa izy ireo. Teratany: Indiana, Aleuts.
Ny tanànan'ny mponina ao Amerika Avaratra indrindra dia Mexico City (Meksika), 8,9 tapitrisa
Ny firenena be mponina indrindra any Amerika Avaratra dia Etazonia, 316,7 tapitrisa
Ny teny lehibe dia anglisy, frantsay, espaniola.
Ny fironana fivavahana izay tena mahazatra indrindra dia ny kristianisma. Namboarina ny torolàlana: ny Vavolombelon'i Jehovah, ny fivavahana pseudo-protestanta, ny Bodista, ny Silamo, ny Mormon, ny evanjelika, ny fiaraha-monina ny Indiana ary ny Afrikana amerikana, ary ny hafa.
Ny firenena malaza indrindra ho an'ny mpizahatany: United States, Kanada, Meksika.
Ny morontsiraka avaratra sy avaratra-atsinanan'ny tanibe dia hita an-tsirony tokoa, mahaforona peninulas sy nosy maro. Farany lehibe indrindra: Hudson, Mexican, California.
Ny penina izay lehibe indrindra dia ny Labrador, Kalifornia, Florida, Alaska, Yucatan. Any avaratra atsinanana no nosy lehibe indrindra eto an-tany - Greenland sy ny nosin'ny Arctic archipelago.
Any atsimoatsinanana dia mivoaka ny Antilles Lehibe, izay ahitana ny nosin'i Cuba, Haiti sy ny maro hafa.
Ny fanamaivanana an'i Amerika Avaratra dia ny lemaka afovoany, lemaka amoron-tsiraka, lembalemba malefaka, havoana ary tendrombohitra. Ny rafi-tendrombohitra dia ahitana ny Cordillera, Rockies, Mount Cascade, Coastal Ranges, Sierra Nevada ary Appalachian Mountains.
Ny renirano lava indrindra sy lalina indrindra dia ny Mississippi izay misy tampon-tanety any Missouri. Misy farihy be dia be eo amin'ny tanibe, izay hita any avaratra, ao amin'ny faritra glaciation. Farihy dimy no mamorona ny rafitra Lakes Great: Upper, Huron, Michigan, Erie, Ontario. Ny roa farany dia ampifandraisan'ny renirano Niagara, izay misy ny farihy Niagara lehibe, misy haavo 50 m ary 1 km ny haavony.
I Amerika Avaratra dia hita any amin'ny faritra climatic rehetra ankoatry ny ekoatera. Io dia ahafahanao mamboly karazan-javamaniry isan-karazany sy any amin'ny faritra sasany ahazoanao voly imbetsaka isan-taona.
Any Amerika Avaratra, ny faritra voajanahary rehetra amin'ny tany dia hita. Manomboka amin'ny lemaka arctic ka hatrany an'efitra. Ny mampiavaka azy any amin'ny tanibe dia ny faritra avaratry ny voajanahary no misy, araka ny fitsipika zoning, ao anaty andalana avy any andrefana ka mankany atsinanana. Ary eo amin'ny faritra afovoany sy atsimo - miakatra amin'ny lafiny avaratra mankany atsimo. Izany dia noho ny terrain sy ny rivotra mahery.
Any amin'ny lemaka lehibe sy ny Mississippi Lowland dia fametrahana menaka, entona, arina. Cordillera dia manankarena ore metaly tsy misy ferrous, volamena ary ornam-uranium. Ao amin'ny Appalachian, apetraka ny orona sy ny arina.
Ny faritra voajanahary samihafa ao amin'ny kaontinanta no mamaritra ny fahasamihafan'ny tontolon'ny zavamaniry.
Ny hazo malaza indrindra any Amerika Avaratra dia ny sehozaza. Ireo konifera ireo dia mihoatra ny 100 metatra ny haavony ary hatramin'ny 9 metatra ny savaivony. Any Amerika Avaratra koa dia maniry volo mainty sy fotsy, hazo balsama, kesika, karazan-ala mihintsana. Ny toetr'andro mafana dia miteraka toe-javatra mety amin'ny fitomboan'ny ahitra, izay anisany be ny voamadinika. Ny zavamaniry any amin'ny faritra avaratra dia asehon'ny mosses sy lichens.
Ny tontolon'ny biby dia isan-karazany ihany koa: ny musk omby, ombidia, coyotes (amboadia amboadia), amboadia, orsa, lynx, martine amerikana, skunks, moose.
Ny ala an-tendrombohitra any Cordillera dia mampiavaka ny raozy, na ny andiam-borona, ny bera mihazona (voatahiry any Alaska), osy oram-panala. Betsaka ny repobilika amin'ny rindrina havoana any an-efitra, anisan'izany ny poizina - rattlenake sy ny sokay; mpitsikilo frinosome, steppe constrictor ary misy hafa. Any Amerika Afovoany, ny West Indies, ary ny ampahany any atsimon'ny Tanànan'i Mexico, ny tanànan'ny tropika dia lehibe, anisan'izany ny amerikanina any atsimo - armadillos, gidro, ramanavy, bizina, voninkazo, sokatra, voay, androngo, sns.
Ireo orsa polar sy polindrozy no hita ao amin'ny faritra tundra. Malaza amin'ny fahaizan'izy ireo milomano sy mandeha lavitra atsimo ny diera Caribbeanou, izy ireo dia mamelona ny lichens ary zava-dehibe amin'ny fahavelomana ny Eskimos.
Amin'ireo biby any Amerika Avaratra manokana, ny olona iray dia afaka manavaka ny porcupain, ny boriky iray izay mipetraka amin'ny hazo.
Any Amerika Avaratra dia 55 ny zaridainam-pirenena XNUMX izay mitambatra ny fiarovana ny flora sy ny biby ary ny fizahan-tany novokarina tsara. Ny valan-javaboary malaza indrindra: Yellowstone, Grand Canyon, Yosemite, Banff, Jasper, Sequoia, Everglades.
Ny mponina any Amerika Avaratra amin'izao fotoana izao dia ahitana ny solontena avy amin'ny foko telo rehetra. Ny teratany sy mpifindra monina avy any Azia dia maneho ny hazakazaka Mongoloid, ny taranaky ny mpifindra monina avy any Eropa dia maneho ny firazanana Caucasoid, ny taranaky ny mpifindra monina avy any Afrika dia maneho ny firazanany. Ny ampahany amin'ny mponina dia mifangaro vondrona: mestizos, mulattos, sns.
Raha ny taona 2016 dia 579 tapitrisa ny mponin'i Amerika Avaratra. Faritra be mponina manakaiky ny Ranomasimbe Pasifika, Great Lakes, Nosy Caribbean. Ny kely indrindra be mponina amin'ny Greenland, ny faritra avaratr'i Kanada, Alaska, ireo nosin'ny Ranomasimbe Arctic.
Ny mponina any Amerika Avaratra dia taranaky ny mpifindra monina avy any Eropa (anglisy, frantsay, Danes) izay nanamboatra ireo tany ireo nandritra ny vanim-potoana fanjanahantany; taranaky ny solontena avy amin'ny hazakazaka ekoatera (Negroid), manafatra ho andevo avy amin'ny kaontinanta afrikanina nataon'ny kolonialista eoropeana hiasa amin'ny fambolena siramamy sy katsaka; aborigines, vazimba teratany izay nitahiry ny mampiavaka ny foko.
Any Etazonia sy Meksika ny mponina Indiana, miteny ny fiteniny sy tenim-paritra, manaja sy mitahiry ny fomba amam-panao sy ny kolontsainin'izy ireo. Foko an'ny Indianina: Apache, Berdash, Kikapu, Oloni, Brulee, Winnebago, Maidu, Sioux, Iroquois ary ny hafa.
Ny Alegianina mipetraka any amin'ny nosy Aleutian Archipelago, noheverina ho firenena tandindomin-doza, ankehitriny ny mponina ao aminy dia 17 eo ho eo.
Ny fiteny lehibe any Etazonia dia anglisy, amin'ny Meksika - Espaniôla Fa ao Kanada ireo fiteny ofisialy roa dia anglisy sy frantsay. Izany dia noho ny zava-misy tamin'ny voalohany ny faritany Kanadianina dia nataon'ny mpanjanaka, ary avy eo ny Anglisy ihany no tonga. Ohatra, ny faritany Quebec dia Frantsay, ny fianarana ny ankizy any an-tsekoly afa-tsy ny teny frantsay.
I Amerika Avaratra no faritry ny tanàn-dehibe indrindra eto an-tany. Ny isan-jaton'ny mponina an-tanàn-dehibe dia mihoatra ny 85% amin'ny fitambaran'ny mponina. Ny ankamaroan'ny mponina dia mirotsaka amin'ny famokarana sy serivisy indostrialy.
Fanjakana sy faritany
Miisa 23 ny fanjakana mahaleo tena ary faritra 23 tsy miankina any Amerika Avaratra. 10 amin'ireo fanjakana mahaleo tena no nibodo ny tanibe, 13 sisa ny nosy.
Ny lehibe indrindra amin'izy ireo dia ny Kanada, United States и Meksika.
Firenena mahaleo tena:
Nosy Amerikana Amerikana(United States)
Bonaire, Sint Eustatius ary Saba(Pays-Bas)
Saint-Pierre sy Miquelon(Frantsa)
Nosy Turks sy Caicos(Grande-Bretagne)
ЎЎ‚Ђ ° ° °ЅЅЅЅЅЅЅ ‹Ѕ ‹‹ ‹‹ ((((United States и Kanada) dia isan'ireo faritra ara-toekarena matanjaka indrindra eran'izao tontolo izao.
Ity faritra ity dia manana toe-piainana voajanahary tsara sy harena manan-karena. Ny indostrian'ny siansa sy teknolojia avo lenta, anisan'izany ny raharaha miaramila sy ny habakabaka, dia nahazo fandrosoana manokana teo amin'ny toekarena. Mandroso tsara ny faritany, mifamatotra avokoa ny faritra rehetra ao aminy, ny lalana sy ny lalana mankany amin'ny rivotra.
Ny zava-mahasarika voajanahary any Amerika Avaratra: Grand Canyon eo amoron'ny reniranon'i Colorado (Etazonia), Lohasahan-tsetroka iray alina (Alaska), Great Lakes, Yellowstone National Park, Devil's Tower Rock, miorina amin'ny Great Plains, Carlsbad Caves (Chihuahua Desert), Niagara riandrano, Tany efitra Fotsy fotsy.
RљR RЅR ° ° ° RґR SЃR "P ° RІRoS, SЃSЏ RїSЂRoSЂRѕRґRЅS <RјRo RїR ° SЂRєR ° RјRo, RєSЂR ° SЃRoRІRμR№S € RoRјRo RїR" SЏR¶R ° RјRo, RіRѕSЂRЅRѕR "C <R¶RЅS <RјRo RєSѓSЂRѕSЂS, R ° Јё Рёё ° ° ° ° »» ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
RњњµµєєЃ ° ° ° ° °ї ° ° ° ° ° ° ° ° ° RїR ° SЂRєR ° RјRo, SЃR ° C ± RјRѕR <S, RЅRѕSЃS, SЊSЋ RєSѓR "SЊS, SѓSЂS <SЃR" RμRґR ° RјRo RґSЂRμRІRЅRoS ... C † RoRІRoR "Rohr · P † RoR№ ° C (° RјR R№SЏ, P ° † † †,, ,ѕѕ ° ° ° ° °. »». °. ° °
RЎRѕRІSЂRμRјRμRЅRЅS <Rμ RґRѕSЃS, RѕRїSЂRoRјRμS ° S, RμR ‡ P "SЊRЅRѕSЃS, Ro RЎRμRІRμSЂRЅRѕR№ RђRјRμSЂRoRєRo, Rohr · RІRμSЃS, RЅS <Rμ RЅR ° RІRμSЃSЊ RјRoSЂ, SЌS, Rѕ SЃS, R S, SѓSЏ RЎRІRѕR ° ± RѕRґS <RїR ° SЂRє Ђ ° ° Р · · · · · »» »» »» » RїRёR »R ° РЅЅѕѕ, С‚‚µµ» Рµ ± Р ° ° ° € €Ѕ €µІµўўёёёёёµµ
RЎRμRІRμSЂRЅR ° SЏ RђRјRμSЂRoRєR ° â € "SЌS, Rѕ RєRѕRЅS, RoRЅRμRЅS ,, SЃRoRЅRѕRЅRoRјRѕRј RєRѕS, RѕSЂRѕRіRѕ RμSЃS, SЊ In" SЃRІRѕR RѕRґR ° ± B ". RS, Rѕ RјRμSЃS, Rѕ SЃRѕRІSЂRμRјRμRЅRЅS <C ... RјRμRіR ° RїRѕR »P ± RoSЃRѕRІ SЃ SѓSЂR" ‰ SЏS RμR№, RЅRμ RѕSЃS, R ° RЅR ° RІR "RoRІR ° SЋS ‰ RμR№SЃSЏ RЅRo RґRЅS'Rј, RЅRo RЅRѕS ‡ SЊSЋ , ¶¶Рё · ·ЅЅЅЅЅЅЅЅ Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р РЅ Р · ... Р ... ... ... ... ... ... Р RôІІІёР »Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р‹ ‹Р‹ ‹Р Р Р Р Р Р Р Р‹ ‹‹ ‹Р‹ ‹‹ ‹‹ ... Р ... »‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹Р‹ ‹‹